Onye na-eme njem kacha mma Hydraulic na Factory | Okwu
Email Nkwado 86-574-87795966
Kpọọ Nkwado ire@nbintech.com
Tranvel planetary jikọtara ya na hydraulic hydraulic na mgbochi valve enyemaka. Ọ na-egosipụta nkwekọrịta kọmpat, ịdị arọ ọkụ, nrụgide ọrụ dị elu, nkwụsi ike dị mma. Ngwongwo ohuru ohuru na hydraulic na-ekwe nkwa ogologo ndụ. Mmepụta torque: 7.5-620KNm Hydraulic Transmission draịva Y usoro na-ọtụtụ-eji na-ewu engineering, ụgbọ okporo ígwè ígwè, n'okporo ụzọ ígwè, ụgbọ mmiri ígwè, mmanụ ala ígwè, kol Ngwuputa igwe, na nkà mmụta banyere ígwè. Y4 Series haịdrọlik transmissions 'mmepụta shaf ...
Tranvel planetary jikọtara ya na hydraulic hydraulic na mgbochi valve enyemaka. Ọ na-egosipụta nkwekọrịta kọmpat, ịdị arọ ọkụ, nrụgide ọrụ dị elu, nkwụsi ike dị mma. Ngwongwo ohuru ohuru na hydraulic na-ekwe nkwa ogologo ndụ.
Mmepụta torque: 7.5-620KNm
A na-ejikarị ụgbọ mmiri na-arụ ọrụ ụgbọ mmiri Y, na-arụ ọrụ ụgbọ okporo ígwè, ígwè ụgbọ okporo ígwè, ígwè ọrụ okporo ụzọ, ígwè ọrụ ụgbọ mmiri, ígwè ọrụ mmanụ, igwe na-egwupụta coal, na ígwè ọrụ igwe. Y Series haịdrọlik transmissions 'mmepụta aro nwere ike ibu nnukwu mpụga radial na axial ibu. Ha nwere ike na-agba ọsọ na nrụgide dị elu, na nrụgide azụ kwere ka ọ bụrụ 10MPa n'okpuru ọnọdụ ọrụ na-aga n'ihu. Oke kachasị ekwe ha casing bụ 0.1MPa.
Ntinye nke hydraulic nwere moto hydraulic, gearbox planet, diski breeki ma ọ bụ ndị na-abụghị breeki） na onye na-ekesa ọtụtụ ọrụ. Typesdị ụdị nrụpụta atọ bụ maka nhọrọ gị. Ahaziri mgbanwe maka gị chepụtara dị n'oge ọ bụla
Ngwunye Hydraulic na-arụ ọrụ 18000 na-arụ ọrụ arụmọrụ dị elu, na-adịgide adịgide, ntụkwasị obi dị ukwuu, nkwekọrịta kọmpat, nrụgide na-arụ ọrụ dị elu na njikwa ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ. The ụdị-adiana ụdị njem draịva ọ bụghị nanị na a ga-ozugbo arụnyere n'ime crawler ma ọ bụ wheel, kamakwa a ga-eji na ụzọ nkụnye eji isi mee ma ọ bụ igwe nri igwe maka ike ntụgharị draịva. Na mgbakwunye, akụkụ na arụmọrụ teknụzụ nke draịva anyị dabara Nebtesco, KYB, Nachi, na TONGMYUNG. Yabụ, draịva anyị nwere ike ịbụ ezigbo ngbanwe maka ngwaahịa ndị ahụ.
Motorgbọ njem a nwere mpempe piston na-agbanwe agbanwe, breeki diski multi, gearbox planet na block valve ọrụ. Ahaziri mgbanwe maka gị chepụtara dị n'oge ọ bụla.
Ntinye Hydraulic Ngalaba isi ihe:
.Dị Mwepu zuru ezu (ml / r) Gosiri Torque (Nm) Ọsọ (rpm) Modeldị Igwe Modeldị Gearbox Brake Model
55000 55286 110867 142544 Ugboro abụọ M6-2500 C79 (m = 22) Z45
67000 66902 134162 172494 Ojuju 0.2-8 M6-3000
80000 77660 155735 200231 Ojuju 0.2-5 M31-350
Nke gara aga: Hydraulic siwing ụwa gearbox
Osote: Hydraulic winch
Hydraulic Travel Motor Reducer
Raulicgbọ njem njem Hydraulic
China N'ogbe China High Quality Mine Ball Mi ...
OEM ngwaahia Mere na China Bekwell 30L Plasti ...
ODM Supplier China Bekwell20-220L Pee Plastic Op ...
Best Price na China High arụmọrụ AC Single P ...
Hot New Products China Omenala Wuru Rubber Craw ...
Site na imeputa ihe ohuru iji mepee ngwa ahia ndi ozo karie iji gboo mkpa nke oganihu di n'ihu, na inye ndi ahia ngwa ngwa, ihe di ala di ala bu n 'azu anyi.